အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မသင်ဘဲရတဲ့ သင်ခန်းစာ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, June 27, 2010 Sunday, June 27, 2010 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
“ဆရာမ ဘယ်တုန်းက ရောက်လဲ.. အလည်လာတာလား.. ”
ထွက်လာတဲ့ နှုတ်ဆက်သံကြောင့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့မှာ ရပ်ပြီး ငေးနေသော ကျွန်မမှာ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘေးနားမှာ လာရပ်သော အသက် ၁၉နှစ်လောက်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး မြင်ဖူးသလိုလို.. သိပ်တော့မမှတ်မိ.. ကျွန်မ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားရသည်… နှဖူးကြောကို ရှုံ့လိုက်ရင်း စဉ်းစားမိတော့လည်း ခပ်ရေးရေး.. သိသလိုလို .. မသေချာပြန်..
“ကျွန်တော် အောင်အောင်လေ ဆရာမ.. ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရာမတပည့် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ”
အိုး.. ဟုတ်ပါရဲ့.. ကျွန်မ မှတ်မိပြီ.. ကျွန်မ အသက် ၁၇ ၁၈လောက်က ၁၀တန်းအောင်ခါစ တက္ကသိုလ်မတက်ခင် အချိန်အားတွေမှာ ကျွန်မရဲ့ ဇာတိရွာကလေးတွင် လုပ်အားပေး ကျောင်းဆရာမ လုပ်ခဲ့စဉ်က သူငယ်တန်းကို သင်ခဲ့ဖူးသည်.. သူကလေးက ကျွန်မအတန်းထဲက ကလေးလေးတစ်ယောက်... ခုချိန်မှာတော့ ငယ်စဉ်ကလို ၀၀ လုံးလုံးကလေး မဟုတ်တော့ သင့်တင့်ကြည့်ကောင်းသော ရုပ်ရည်ကလေးနှင့် အရွယ်ရောက်နေသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ . သူသာ မနှုတ်ဆက်ခဲ့ရင် ကျွန်မအနေနဲ့ မှတ်မိစရာမရှိ.. အင်းလေ ဖြစ်စရာပါဘဲ.. ကျွန်မရဲ့ ဇာတိကလေးကို ခွဲခွာပြီး တစ်ရပ်တစ်နယ်မှာ ရောက်နေခဲ့တာဘဲ ၁၀စုနှစ် တစ်ခုစာ ရှိခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလား.. အိမ်ကိုပင် နှစ်စဉ်မှန်မှန် မပြန်ဖြစ်နိုင်အောင် အလုပ်သံသရာထဲ လည်ပတ်စီးမျှောလို့ နေခဲ့သည်။ ဆိုင်ရှေ့တွင်ချထားသော ခုံတန်းလေးပေါ် ထိုင်ရင်း ကျွန်မရဲ့ တပည့်ကလေး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော အောင်အောင်နှင့် ကျွန်မ စကားပြောဖြစ်ကြသည်..
“အောင်အောင်က တကယ့်လူကြီး ဖြစ်နေပြီလေ.. ဒါကြောင့်ဆရာမ မမှတ်မိတော့တာပေါ့ နေကောင်းတယ်မဟုတ်လား ကလေး.. တက္ကသိုလ်တက်နေပြီလား…” ကျွန်မ အောင်အောင်ကို ပြန်မေးလိုက်တော့
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်နေပါပြီ.. ”
“ဟုတ်လား.. ကြားရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ.. မင်းသူငယ်ချင်းတွေရော ”
အောင်အောင်က သူနဲ့ ငယ်စဉ်က တွဲခဲ့သော သူငယ်ချင်းများအကြောင်း ကျွန်မကို ပြန်ပြောပြသည်.. တော်တော်များများကတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ.. ထိုစဉ်က အတန်းထဲက ကလေးတစ်ချို့ နံမည်တွေကိုတော့ ခုချိန်ထိ မှတ်မိနေသေးသည်.. အချို့ကျတော့ ကျွန်မ မမှတ်မိတော့.. ကျွန်မ စာသင်ပေးခဲ့ဖူးသော ကလေးတွေပင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ... ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာ... ပီတိဖြစ်စရာပါ.. ကိုယ်စိုက်ပျိုးခဲ့သော၊ ရေလောင်းပေါင်းသင် လုပ်ခဲ့ဖူးသော ပန်းကလေးများ ဖူးပွင့်လာလျှင် ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်ရသော ဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်၏ ပီတိမျိုးဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
စကားများစွာ ပြောဆိုပြီးလို့ သွားတော့မည်ဟု လေးလေးစားစား ပြောဆိုကာ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားသော အောင်အောင်ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်မ စိတ်တွေက ထိုစဉ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ကျောင်းဆရာမလေးတစ်ယောက် လုပ်ခဲ့စဉ်က အဖြစ်အပျက်များ၊ အတွေ့အကြုံများကို ပြန်ပြီး သတိရသွားမိသည်.. အောင်အောင်ကိုတော့ လူကိုသာ မမှတ်မိ ရှိရမည်.. သူနှင့် သက်ဆိုင်သော အဖြစ်အပျက်လေးကိုတော့ သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုအဖြစ် ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသရောက်ရောက် ကျွန်မ သတိတရနှင့် အမှတ်ရနေခဲ့ပါသည်..
အဲဒီချိန်တုန်းက ကျွန်မ စာသင်ရသော သူငယ်တန်း(A) သည် ကျောင်းသား ၆၀ကျော် ရှိသော အတန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်.. အဲဒီနေ့က သူငယ်တန်း မြန်မာစာ သင်ခန်းစာရဲ့ နောက်ဆုံးအခန်းများကို သင်ကြားနေသော စာမေးပွဲကြီး သိပ်မလိုတော့သော တစ်နေ့လဲဖြစ်သည်.. စာမေးပွဲ နီးနေပြီဖြစ်၍ ကျွန်မက လက်ရှိ သင်ခန်းစာများကို အမြန်လက်စသပ်ကာ အစကနေ ပြန်ပြီး သင်ကြားလိုသော စိတ်စေတနာဇောနှင့် လောကြီးနေခဲ့သည်.. ပြီးတော့လဲ သင်ခန်းစာတွေက အနောက်နားရောက်လေ ကလေးတွေအတွက် ပိုပြီး ခက်ခဲလာလေ ဆိုတာကိုလည်း သဘောပေါက်မိသဖြင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည် သင်ကြားဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိပေးနေရသည်.. ထို့ကြောင့် အဲဒီနေ့က သင်ကြားနေသော မြန်မာစာ ဖတ်စာလေးတစ်ခုကို သင်ပုန်းပေါ် ချရေးပြီး ကြိမ်လုံးကလေးနှင့် ထောက်ကာထောက်ကာ နှုတ်တိုက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ချပေးနေခဲ့ရင်းက နှုတ်တိုက်ချပေးရသော အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြောင့် လည်ချောင်းတွေပင်ခြောက်သွေ့လာပြီး ကျွန်မအသံတွေ ပြာအက်လာရသည်။
ဒီနေ့ သင်ခန်းစာသည် ကလေးတွေအတွက် တကယ်လဲ ခက်ခဲပါသည်.. သူတို့လေးတွေကို လိုက်ဆိုခိုင်းတာလည်း အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ရှိနေခဲ့ပြီ.. သို့သော် ကျွန်မအရှေ့က မဆိုပြတော့ဘဲ သူတို့ချည်း ဆိုခိုင်းလိုက်ရင် ကပေါက်တိကပေါက်ခြာနှင့် အလွဲလွဲ အချော်ချော်သာ ဖြစ်နေကြတုန်း.. မည်သူကမှ ကောင်းကောင်းဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေး.. ဒီတော့ ကြိမ်လုံးလေးကို ပြန်ကောက်ကိုင်ရင်း နောက်ထပ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လိုက်ဆို ခိုင်းပြန်သည်.. နာရီလက်တံတော်တော်များများ လည်ပတ်ပြီးချိန်မှာ သူတို့ချည်း ပြန်ဆိုခိုင်းတိုင်း ချောချောရှူရှူမဖြစ်.. အထစ်ထစ်နှင့် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဖြစ်နေတုန်းသာ.. စိတ်ကို ဆွဲဆန့်ကာ နောက်တစ်ကြိမ် ရှေ့က တိုင်ပေးပြန်ရင်း ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ ဒီလောက်တောင် ညံ့ရပါ့မလား.. ဘာကြောင့် ခုချိန်ထိ မရကြသေးတာလဲ.. ဒီပုံနဲ့ ရှေ့ဆက် သင်ခန်းစာ ဘယ်လိုများ ဆက်သင်ရမလဲ စသည့်အတွေးများဖြင့် ဒေါသလဲ ထွက်လာရသည်..
နောက်ထပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရှေ့ကတိုင်ပြီး ကလေးတွေချည်း ပြန်ဆိုခိုင်းပြန်တော့လဲ အရင် အကြိမ်တွေ တုန်းကအတိုင်းသာ.. ထစ်ထစ်ငေါ့ပေါ့နှင့်.. မည်သူမှ စာတစ်ကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မဆိုနိုင်ကြ.. ဒီလောက်အချိန်ပေးပြီး ရှေ့က တိုင်ပေးနေတာအောင် ဘာမှ ထူးခြားမလာ.. ကျွန်မရဲ့ ဒေါသများက အဆုံးထိ မြင့်တက်သွားခဲ့ပြီး ကြိမ်လုံးလေးကို ကိုင်ကာ သင်ပုန်းရှေ့ရပ်နေသောကျွန်မ.. လက်ထဲက ကြိမ်လုံးကို အားကုန် လွှင့်ပစ်လိုက်ကာ အတန်းထဲမှ ထွက်သွားတော့မိသည်။ အတန်းအပြင်ဘက် အခန်းနှင့် ခပ်ဝေးဝေးက ၀ရံတာလေးမှာရပ်ရင်း စိတ်ထဲတွင် ဆူဝေနေသော ဒေါသများ စိတ်မရှည်မှုများကို တော်တော်လေးကြာအောင် ဖြေဖျောက်နေရသည်။ အချိန်အနည်းငယ် အကြာမှာတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်ဖြေသိမ့်နိုင်မှု ရသွားခဲ့ပြီး ဒေါသများလျှော့ပါးသွားသည့်အခါ ကျွန်မခြေလှမ်းများက အတန်းထဲသို့ ပြန်ဝင်ရောက်လာမိတော့သည်..
အတန်းထဲရောက်လို့ ကလေးတွေရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်မိတော့ နားလည်သိတတ်သော ကလေးများက မျက်နှာငယ်ကလေးနှင့် ကျွန်မကို ကြည့်လို့နေခဲ့သည်။ သူတို့လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်း ကရုဏာစိတ်တို့ဖြင့် ကြိမ်လုံးလေး ပြန်ကောက်ကိုင်ကာ သင်ခန်းစာကို ပြန်သင်ကြားမိပြန်တော့သည်.. အစောတုန်းကလို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရှေ့မှ တိုင်ပြီးသောအခါ ကလေးများကို ချိုချိုသာသာနှင့် စကားပြောကာ သူတို့ချည်းဆိုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တော့ စာဆိုသံထွက်မလာခဲ့.. ကျွန်မက ကြိမ်လုံးလေး ၀င့်ကာ မျက်ခုံးလေး ပင့်လိုက်ရင်း ဆိုကြလေ “ဘာလို့မဆိုကြတာလဲ” လို့ ကလေးတွေကို မေးလိုက်စဉ်တွင်တော့ အောင်အောင်ကလေး ကျွန်မကို ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးက ဘယ်တော့မှ မမေ့ချင်စရာ “ သားတို့ မဆိုချင်ဘူးဆရာမ.. သားတို့ ဆိုတာ မှားရင် ဆရာမ စိတ်ဆိုးမှာ.. ဆရာမ နောက်တစ်ခေါက် စိတ်ဆိုးမှာ စိုးတယ်.. ဒါကြောင့် သားတို့ မဆိုချင်ဘူး..” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အောင်အောင်လေးရဲ့ စကားအဆုံးမှာ ကျွန်မရဲ့ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားသော ကြိမ်လုံးက အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်.. အိုး ကြည့်ပါဦး.. ၅နှစ်အရွယ် ကလေးတွေကတောင် ဆရာမကို ချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဆရာမလုပ်သူ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်မှာကို စဉ်းစား တွေးတော ပေးတတ်သေးသည်.. သူတို့ထက် အသက်အရွယ် ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကတော့ ကလေးတွေလောက်တောင် စဉ်းစားဆင်ခြင်စိတ် မရှိပါဘဲလား.. ရှက်ဖို့တောင် ကောင်းသေးသည်.. ဒီနေ့သင်ခန်းစာသည် သူတို့အတွက် ခက်ခဲလွန်းနေသောကြောင့် ခုချိန်ထိ မဆိုနိုင်သေးတာကို ကျွန်မက နားလည်မှု မပေးနိုင်ခဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုတည်း၊ သင်ခန်းစာများ အမြန်ပြီးလိုသော စိတ်နှင့်သာ ကြည့်ခဲ့မိသည်ထင်သည်။
ထိုနောက်ပိုင်း ဆရာမသက်တမ်းကာလ တစ်လျှောက်လုံး စိတ်ဆိုးပြီး စာသင်ခန်းထဲက ထွက်သွားသည့် အပြုအမူမျိုး ဘယ်သောအခါမှ ကျွန်မ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ပါ. ကလေးဆိုသည်မှာလည်း အသိဥာဏ် ၊အမှတ်သညာ ရှိတတ်သော သူများသာဖြစ်သည်မဟုတ်လား.. ကလေးတွေလောက်ပင် မရင့်ကျက်သော၊ စာနာနားလည်စိတ် နည်းပါးသော၊ မိမိကိုယ်ကိုလဲ အောင်အောင်ရဲ့ စကားသံလေးတွေ ပြန်ကြားမိတိုင်း၊ ပြန်တွေးမိတိုင်း သတိတရနှင့် ရှက်နေတတ်ခဲ့ပါသည်.. ကျွန်မအတွက်တော့ မှတ်မှတ်ရရ ၅နှစ်အရွယ် သူငယ်တန်း ကလေးတစ်ယောက်ဆီက မသင်ယူဘဲ ရရှိလိုက်သော သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မရဲ့ ငယ်စဉ်က ဆရာမဘ၀ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကို ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
23 Responses to “မသင်ဘဲရတဲ့ သင်ခန်းစာ”
June 27, 2010 at 11:02 PM
မင်္ဂလာပါ ဆရာမ ...
တကယ်တော့ ဆရာ ဆို တဲ့ အလုပ် က မခက် ခဲ သလောက်
မ လွယ် ကူ ပါ ဘူး ဗျာ။ မည် သို့ ဆို စေ....အနာဂတ် ပန်းပွင့်လေး တွေ
အ တွက် အ ပင် ပန်း ခံ စိုက် ပျိုး ကြ ရ တာ ဆရာ ဆို သော ပန်းပျိုးလက်
များ (ဥယျာဉ်မှူး) များ ပါ ပဲ။
သမီးကိုကော မှတ်မိလားဟင်းD (နောက်စ်)
ကလေးတွေက တအားအပြစ်ကင်းပြီး ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်နော်
ဖတ်ပြီး ကြိမ်လုံး ပြုတ်ကျ သွားရုံ တင်မဟုတ် ဘူးနော်၊ ရင်ထဲ မှာ ပါ “ နင့် ” ကနဲ ဖြစ်
သွား ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဖတ်နေရင်း နဲ့မျက်စေ့ သူငယ်၊ မျက်နှာ ငယ် ဖြစ်နေတဲ့ 
အဲ့ ဒီ ရင် သွေး လေး တွေ ရှေ့ရောက် သွားတာလေ၊ ပါးကွက် ကလေး တွေ နဲ့ 
မဟုတ်လား၊ လေးစား သွား ပါတယ် ဆရာမ ရေ့...။
June 28, 2010 at 12:35 AM
ရော့...မကြီးချောရေ ကြိမ်လုံး ကျသွားလို့ပြန်ကောက်ပေးတာ ဟီး။ အစ်မက အတွေ့အကြုံတော်တော် လေးများတာပဲနော်။ လေးစားအားကျပါ၏ ခင်တဲ့(ချိုကျ)
June 28, 2010 at 1:12 AM
ချာမ သာမီးလည်း ရသေးဘူး သာမီးက ဥာဏ်မကောင်းဘူး ချာမ
June 28, 2010 at 4:32 AM
June 28, 2010 at 5:29 AM
ငွေသော်တာရောင်ခြည် ထိန်လင်းတော့သည် ဘုံကြိုးပြတ်တဲ့ မိုးနတ်မဒီ ချောချောဆရာမကိုဘဲ.......
ဆရာအလုပ်ထက်ကောင်းတဲ့ အလုပ်မရှိသေးဘူးထင်တယ်နော ပျော်စရာကောင်းတယ်
ဇေငယ်ငယ်ကဆရာမကြီးရင်ရင်ဝိုင်းမူကြိုမှာ ၊ အဲလိုအဓိပ္ပါယ်နဲ့ဆင်တူစကားလေးတွေပြောဘူးတယ်
ဇေမှားရင် တီချယ်က ဆူမှာပေါ့လို့ မူကြိုကျောင်းသားဘ၀လေးကိုတောင်သွားသတိရမှိသေး လာဖက်
သွားပါတယ် မင်္ဂလာပါဆရာမ ...အဲဟုတ်ပေါင်
June 28, 2010 at 2:39 PM
ဆရာမကိုပဲ အသည်းစွဲအောင် ချစ်တော့မည်..........
ချာမ...မီးလည်း နောက်တစ်ခါ ချာမဘာသင်ပေးပေး လိုက်မရှိုတော့ဘူးနော်....မှားတွားရင် ချာမ ချိတ်ချိုးမှာကြောက်ရို့......
(အဟမ်း အဟမ်း....ငါ့အစ်မဆီကနေ ကလေးတွေကိုစာသင်တဲ့ နည်းတွေပြန်လေ့လာရမယ်)
မသင်ပဲ ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ က ဘ၀မှာ ပိုပြီး အမြဲ အမှတ်ရနေစေပါတယ်...
ဆရာမ မင်္ဂလာ မာဂလင်ပါ...း))))....
June 29, 2010 at 4:53 AM
ဆရာမက အခန်းပြင် မထွက်လည်း မျက်နှာကျောကြီး တင်းနေရင် ကလေးတွေက ကြောက်ကြရတာပါပဲ။ စိတ်မရှည်တတ်တဲ့ ကျနော်တော့ ဆရာ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိင်လောက်ဘူး ထင်တယ်။
June 29, 2010 at 8:28 AM
သင်ခန်းစာကိုဖတ်ရင်း သင်ခန်းစာတွေယူတတ်တဲ့ အရည်အသွေးကို ချီးကျူးပါရစေ...
ကိုယ်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာ ကြုံရသမျှလေးတွေကနေ အခုလို သင်ခန်းစာယူတတ်တဲ့ သဘောထားကို အလေးအနက်ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုယ့်ဘဝအတွက် အရာအားလုံးအပေါ် ကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်း ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်အပြီးမှာ သင်ခန်းစာရသွားသလိုပါပဲ....
June 29, 2010 at 11:04 AM
နယ်တွေမှာ ဆွဲခန့် ဆရာ ဆရာမလုပ်နေတာလေးတွေ မြင်သာထင်သာ ဖြစ်မိတယ်
ကျွန်မလည်း ငယ်ငယ်က မူလတန်းဆရာမ အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။
အမေကလည်း ဆရာမပဲလေ။ တော်တော် အပင်ပမ်းခံပြီး သင်ပေးခဲ့တာပဲနော်။
Aung Kyaw Oo said...
July 3, 2010 at 9:33 PM
အတွေ့အကြုံလေး ပြန်လည်ဝေမျှတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဘ၀မှာ ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာ သင်ခန်းစားယူစရာတွေပါနော်..
တပည့်တွေတောင် တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ကုန်ပြီဘဲ။ ဥယျာဉ်မှူးလုပ်ခဲ့ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာချင်စရာကြီး။ ဒါကြောင့် မချောမျက်နှာမှာ ဆရာမစတိုင်လ်မျိုးပေါက်နေတာ။းဝ)
September 29, 2010 at 11:57 PM
မမရေ ဒီပိုစ့်လေးကို အခုမှ ဖတ်မိတာပါ .......
အတွေ့အကြုံတွေကို လှပစွာ စာဖွဲ့တတ်တဲ့ မမရဲ့ အရည်အချင်းကိုလည်း အားကျမိပါတယ်
ကလေးလေးတွေက အပြစ်ကင်းကြပါတယ် မမ
ညီမလေး ကတော့ ကလေးလေးတွေအပေါ် ဒေါသနဲ့ ဆက်ဆံတာကို သဘောမကျတတ်ပါဘူး
မမချော စာတွေ အများကြီးရေးဖွဲ့နိုင်ပါစေ............
U Aung Khin said...
October 9, 2010 at 12:46 AM
April 12, 2014 at 5:08 AM